एकैदिन थपिए ४ हजार ८७ संक्रमित, कति जनाकाे भयाे मृत्यु ? - News 88 Post
एकैदिन थपिए ४ हजार ८७ संक्रमित, कति जनाकाे भयाे मृत्यु ?
January 14, 2022 N88LeaveaComment on एकैदिन थपिए ४ हजार ८७ संक्रमित, कति जनाकाे भयाे मृत्यु ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ८७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बितेको २४ घण्टामा देशभर १३ हजार ४७४ जनामा आरटी–पीसीआर गर्दा ४ हजार २०४ जना र ७ हजार ८६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८८३ जना गरी आज ५,०८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८ लाख ४५ हजार ५०१ जना पुगेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ६१० जना पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३०६ जना संक्रमित निको भएका छन् । यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ८ लाख १५ हजार ६५३ जना पुगेको छ । यो कुल संक्रमितको ९६.५ प्रतिशत हो ।
हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १८ हजार २३५ जना छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा ४९ लाख ८१ हजार २६० जनाको स्वाब ९नमूना० परीक्षण गरिएको छ भने अहिले १८ हजार २३५ जना आइसोलेसन र ११५ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।
साउथ इन्डियन सुपरस्टार रामचरणकाे सम्पती कति छ ? आलिशान घर, विलासी गाडी र एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक !
यी ४ चीज देखिनु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ, दिन्छ कुनै पनि कामको सफलताको संकेत
माधव नेपाललाई सताइ रहेकाे एउटा डर, जसका कारण एमाले पार्टी न फुटाउन सक्छन् न जुटाउन !
सिद्धाबाबा भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लाग्दा स्कार्पियाे तिनाउ नदीमा ख स्यो, ४ जना घा इ ते
सरकारमा बसेर सडकमा सरकारको विरोध
February 18, 2022 N88